Etu esi tinye Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Google Hootsuite | Martech Zone
Wednesday, May 9, 2012 Wenezde, August 22, 2018 Douglas Karr
Nyaahụ anyị mara ọkwa na DK New Media akpọrọ a Hootsuite Onye Mmekọ Anyị na-eji ihe niile Hootsuite Pro akaụntụ maka afọ ole na ole ma hụ n'ihu atụmatụ na mgbanwe ọ na-enye ndị otu anyị. Na… ọ bụ na nta nke akwụ ụgwọ nke ọtụtụ na-elekọta mmadụ na-ekwusara engines.
Anyị na-akwali ndị ahịa anyị niile ka ha nwee ike ịkwalite mgbasa ozi mgbe ị na-ede njikọ ha Hootsuite. Ọtụtụ ndị folks chere na ọ dị ha mkpa iji aka ha dee URL querystring - mana Hootsuite n'ezie awade a mara ezigbo mma interface maka appending ndị dị mkpa mkpọsa nsuso ọmụma.
Ihe mejupụtara mkpọsa ahụ bụ 5 ntinye:
Isi Mgbasa Ozi (utm_source) - ihe achọrọ. Jiri utm_source iji chọpụta igwe nchọ, aha akwụkwọ akụkọ, ma ọ bụ isi mmalite ndị ọzọ. Ihe Nlereanya: utm_source = google
Mgbasa Ozi Mgbasa (utm_medium) - ihe achọrọ. Jiri utm_medium iji chọpụta ụdị dị ka email ma ọ bụ pịa-akwụ ụgwọ. Ihe Nlereanya: utm_medium = cpc
Mgbasa Ozi Okwu (utm_term) - nhọrọ nhọrọ. Ejiri maka nyocha akwụ ụgwọ. Jiri utm_term mara mkpụrụokwu okwu mgbasa ozi a.
Ihe Nlereanya: utm_term = agba ọsọ + akpụkpọ ụkwụ
Ọdịnaya Mgbasa Ozi (utm_content) - nhọrọ nhọrọ. Ejiri maka ule A / B na mgbasa ozi ezubere iche. Jiri utm_content ka ọdịiche dị n'etiti mgbasa ozi ma ọ bụ njikọ ndị na-arụtụ aka n'otu URL. Ihe atụ: utm_content = logolink or utm_content = ederede
Aha Mgbasa Ozi (utm_campaign) - nhọrọ nhọrọ. Ejiri maka nyocha isiokwu. Jiri utm_campaign iji mata otu nkwalite ngwaahịa ma ọ bụ usoro mgbasa ozi. Ihe Nlereanya: utm_campaign = mmiri_sale
Nke a bụ ebe dị nso ebe anyị debere URL ahụ Nchịkọta mgbasa ozi nchịkọta Google. Ọ bụrụ na ịlele igbe nhọrọ, ịnwere ike ịnwe ya mgbe niile tinye nsuso mkpọsa na URL ọ bụla. Nke ahụ abụghị echiche ọjọọ ... ma nwee ike ị nweta radar nke saịtị ndị dị n'èzí na ị na-eziga ọtụtụ okporo ụzọ ntugharị.
Mgbe ị banyere URL gị na mpaghara njikọ ahụ, ị ​​ga-ahụ gia ị nwere ike pịa iji dobe ala ndị dị elu iji tinye nsuso mkpọsa. Otu n'ime ihe atọrọ atọ bu Google Analytics. Ọ bụrụ na ị na-eji weebụ ọzọ nchịkọta n'elu ikpo okwu, ị nwere ike itinye mgbakwunye ntọala gị ebe a, kwa!
Anyị ga-ekerịta ọtụtụ ndụmọdụ na aghụghọ ebe a ka esi etinye ego zuru ezu Hootsuite Pro n'ihi na gị ụlọọrụ na-elekọta mmadụ media azum. Ngosipụta: Anyị ga-ekerịta njikọ njikọta mgbe anyị biputere isiokwu ndị a.
Tags: nchịkọta nchịkọtamkpọsa mkpọsaGoogle Analyticshootsuite
Nnukwu data na-eweta ahia nnukwu ọnụọgụ
Veracity Teknụzụ LLC
Mee 24, 2012 na 7: 34 AM
Daalụ maka nnukwu edemede a! Obi na-adị m ezigbo ụtọ ịmụ gbasara ihe ndị a